सेकेन्हेन्ड गाडी किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने यो सूचना तपाईलाई काम लाग्न सक्छ।
सेकेन्डहेन्ड गाडी किन्दा गरेको गल्तिले तपाईलाई जेल समेत हुनसक्छ। त्यसैले सेकेन्हेन्ड गाडी किन्दा यी कुरा ध्यान दिनुहोस्।
केन्डहेन्ड गाडी किन्नु भन्दा पहिले आफ्नो बजेट कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। हामीले गाडीका लागि छुट्याएको बजेटमा बजारमा कुनै कम्पनीको नयाँ गाडी छ की छैन भन्ने अध्यन गर्नुहोस्।
गाडी र गाडी धनीको पृष्ठभूमि
गाडी किन्नु भन्दा पहिला गाडी र गाडीको मालिकको बारेमा जानकारी राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तपाईले किन्नलागेको गाडीबाट कुनै दुर्घटना भएको छ की छैन? तपाईले किन्दै गरेको गाडीबाट कुनै गैरकानुनी काम त भएको छैन्? गाडी धनीमाथि कुनै किसिमको केश त परेको छैन? यी कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
किन भने कहिले काँही हामी सस्तो मूल्यमा गाडी पाउँदा बिना सोच बिचार गाडी किन्न सक्छौँ यस्तोमा हामीलाई पुलिस स्टेसन धाउनुपर्ने हुनसक्छ वा आफू निर्दोश भएको प्रमाण पुर्याउन नसके जेल समेत जानुपर्ने हुनसक्छ।
बिना बिश्वास नकिन्नुस् गाडी
सेकेन्डहेन्ड गाडी तब मात्र किन्नुस् जब तपाईलाई गाडी र गाडी बेच्नेमाथि पूर्ण बिश्वास छ। यदी हामीले नयाँ मान्छेबाट गाडी किन्यौँ भने हामी फस्न पनि सक्छौँ।